Ciidamada dowladda oo howlgal weerar culus ku qaaday saldhig ugu weyn Al-Shabaab - Awdinle Online
Ciidamada dowladda oo howlgal weerar culus ku qaaday saldhig ugu weyn Al-Shabaab
Ciidamada Ururka 260aad Guutada 9aad Qeybta 60aad ee Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa Maanta howlgal qorsheysan ka fuliyay degaannada Dhurey ,Kurta Arbasale oo hoos yimada Degmad Waajid Ee Gobolka Bakool, halkaas oo ay ku sugnaayeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Saraakiisha howlgalka hoggaamineysay ayaa waxaa ay Warbaahinta u sheegeen in howlgalka ay ku burburiyeen saldhigyo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab, kadib cabasho ay u soo gudbiyeen dadka degaanadaas.
.Abaan Duulaha Ururka 260aad Guutada 9aad Qeybta 60aad ee Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed Labo Xidigle Isaxaaq Ibraahim ayaa sheegay in hwogalka uu u dhacay sidii ay doonayeen, isla markaana guulo waaweyn ay ka gaareen.
Waxaa uu hadalkiisa uu intasi ku daray in Ciidamada ay weli howlgalka siiwadaan, isla markaana uusan joogsan doonin ilaa iyo inta ay degaannada hoostaga degmada Waajid ee Gobolka Bakool ay ka saarayaan Al-Shabaab.
Howlgalka Ciidamada Millateriga Soomaaliya ay ka sameeyeen degannada hoostaga degmada Waajid ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli saacadihii la soo dhaafay uu dagaal culus ku dhex-maray degaano ka tirsan gobolka Bakool Ciidamada Dowladda & Al-Shabaab.
Previous articleFaah faahin: Khasaaro ka dhashay qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo
Next articleGalmudug oo ku dhawaaqday in dad loo qabtay qarixii Gaalkacyo